Booliska Soomaaliya oo shacabka faray iney ka feejignaadaan bacaha la dhigo wadooyinka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Booliska Soomaaliya oo shacabka faray iney ka feejignaadaan bacaha la dhigo wadooyinka
Muqdisho – Mareeg.com: Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kula taliyey shacabka Soomaaliyeed iney ka feejignaadaan bacaha iyo waxyaabaha la mid ah ah ee la dhigo hareeraha wadooyinka Muqdisho.
Digniinta kazoo baxday booliska Soomaaliya ayaa timid kadib markii shalay qarax lagu dilay xog-hayihii hore ee gobolka Banaadir, Cabdi-kaafi Hilowle Cusmaan, kaasoo gaarigii watay lala beegsaday walxaha qarax oo lasoo geliyey bac, lana dhigay wadada dhinaceed.
Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed, G/dhexe Qaasim Axmed Rooble oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howl gallo lagu difaacayo shacabka hase yeeshee loo baahan yahay in bulshadu ay hay’adaha ammaanka ku taageeraan sidii looga hortagi lahaa dadka dhibaatada ka wada magaalada.
Afhayeenku wuxuu shacabka ugu baaqay inay feejignaadaan haddii ay khatar dareemaan oo ay arkaan wax ay ka shakiyeenna ay la xiriiraan hay’adaha ammaanka.
Halkii shalay lagu qarxiyey gaariga uu watay marxuum Cabdi Kaafi Hilowle ayaa aheyd meel aad ugu dhow isgoyska KM4, islamarkaana aysan suuragl aheyn in miino la gelio, sababtoo ah waxaa wadadaas si wanaagsan u dhisay dowladda Turkiga.
Sida boolisku sheegay, Alshabaab ayaa badelay khidadooda kadib markii dib loo dhisay wadada Maka Almukarrama oo ay dowladdu adeegsato, iyagoo bilaabay iney miinada bac kusoo ridaan, islamarkaana dhigaan wadada dhinaceeda.
Waxaa xusid mudan in Alshabaab sheegteen qaraxii shalay lagu dilay xoghayihii hore ee maamulka gobolka Banaadir, Cabdi-kaafi Hilowle Cusmaan.
Man City oo ku soo laabatay hogaanka Horyaalka Ingiriiska iyo Man United oo la garaacay
Somali Police forces conduct security sweeps in Mogadishu